ကဒ်ဒီဇိုင်း DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
သင်တစ်ဦးဂိမ်း developer ဖြစ်လာချင်လျှင်, သင်အင်ဂျင်ဟုခေါ်တွင်ဂိမ်း၏ဖန်တီးမှုများအတွက်အထူးအစီအစဉ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုအများဖြစ်ကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရောနှောကြည့်ပါ။ သငျသညျသင်တန်းနှင့်အစွမ်းထက် tools များ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုသောနှစ်ဦးစလုံးရိုးရှင်းအင်ဂျင်များ, ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ CryEngine စဉ်းစားပါ။
CryEngine - ဒီက PS4, Xbox One အပါအဝင်သင်ကို PC နဲ့ Consoles များအတွက်သုံးရှုထောင်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးနိုင်သည့်နှင့်အတူအာဏာအရှိဆုံးအင်ဂျင်, တစ်ခုဖြစ်သည်။ CryEngine ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်များယခုအချိန်အထိများစွာလူသိများတဲ့ developer များနှင့်အတူရေပန်းစားသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို 3D နဲ့ Unreal Development Kit ၏စွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်။
ကျနော်တို့ဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်အခြား program ကိုတွေ့မြင်အကြံပြု
ရောမမြို့၏သားတော်ကို: အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူလူသိများဂိမ်း Far Cry CryEngine နှင့် Crysis3နှင့် Ryse ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
Flow ဇယား - KrayEndzhin developer များလက် In-ဂိမ်း level ကိုယုတ္တိဗေဒ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိရိယာတခုပေးပါသည်။ ဒီ tool ကအမြင်အာရုံနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ဖြစ်ပါသည် - သင်ရုံ parameters တွေကိုနှင့်အတူအထူးအပေါ်တစ်ဦး node ကိုဆွဲယူ, ပြီးတော့တစ်ဦးယုတ္တိ sequence ကိုဖွဲ့စည်းရန်သူတို့ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ Flow ဇယားနှင့်အတူ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖော်ပြရန်နိုင်ပြီး, သငျသညျရှုပ်ထွေးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Tool ကို "ဒီဇိုင်နာ"
CryEngine ခုနှစ်တွင်သင်သည်မည်သည့်အဆင့်ဒီဇိုင်နာရန်လိုအပ်သော tools တွေကိုအစုတခုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒီဇိုင်နာ tool ကိုဒီဇိုင်းနေရာများတွင်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်အင်ဂျင်သို့ငြိမ်ဂျီသြမေတြီ၏လျင်မြန်သောဖန်ဆင်းခြင်းများအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသင်လျင်မြန်စွာတခါ, လာမယ့်တည်နေရာကိုသူတို့အပျေါမှာတိုက်တွန်းအရွယ်အစားကိုညွှန်းများနှင့်ချက်ချင်းအင်ဂျင်သို့ texture superimposing မှာမော်ဒယ်၏ပုံကြမ်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Tool ကို "Maniquen Editor ကို" animations တွေကိုကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပေးသည်။ က, သင်ကစားပွဲများတွင်မဆိုဖြစ်ရပ်၏ရလဒ်အဖြစ် activated မည်ဖြစ်ကြောင်း animations တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အချိန်ကိုလိုင်းကာတွန်းအပေါ်တဦးတည်းအပိုင်းအစသို့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ system ကို KrayEndzhin ပြောင်းပြန် kinematics ဇာတ်ကောင်, မော်တော်ယာဉ်, အစိုင်အခဲများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအလောင်းကောင်၏ရူပဗေဒ, အရည်, တစ်ရှူးထောက်ခံပါတယ်။
1. Excellent က image ကိုမြင့်မား optimization နှင့်ထိရောက်မှု;
အသုံးပြုမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ 2. လွယ်ကူ;
အင်ဂျင်၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးအလွန်နိမ့်စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက် 3. ;
4. Development Tools တွေကိုတစ်ဦးကကြီးမားသောထား။
Russification ၏ 1. မရှိခြင်း,
ဆော့ဖ်ဝဲ၏မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်3။
CryEngine - ဤသူသည်သင်တို့မည်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ဂိမ်းအင်ဂျင်တွေထဲကနှင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားနေသော်လည်းဂိမ်းသံမှတောင်းဆိုသည်မဟုတ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားအဖြစ်အစီအစဉ်များမတူဘဲသို့မဟုတ်2ဆောက်လုပ်ရေး, KrayEndzhin - ဒီလုပ်ငန်းခွင်မဟုတ်ပါဘူးနှင့် programming ကိုအသိပညာလိုအပ်သည်။ မှတ်ပုံတင်အပြီးတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွင်, သငျသညျထို program ၏ Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်စမ်းသပ်ဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ CryEngine Download
3D Rad Unreal Development Kit RonyaSoft ပိုစတာဒီဇိုင်နာ X-ဒီဇိုင်နာ
CryEngine - ဤရှုပ်ထွေးမှုမဆိုအမျိုးအစားနှင့်အဆင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်း၏ဖန်တီးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီပလက်ဖောင်းနှင့်အတူများစွာသော hits စက်မှုလုပ်ငန်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အရွယ်အစား: 1900 ကို MB
ဗီဒီယို Watch: แหวน5ทาแสน -5Golden Rings. . 25 . 62 (အောက်တိုဘာလ 2019).